Company Profile - PuSiTuo tsaina Teknolojia
Zhejiang Pusituo tsaina Teknolojia Co ., Ltd, established in 2003, is located in a beautiful port city in the east coast China Sea – Ningbo.
Manana efa ho 50.000 metatra toradroa ny R & D sy ny famokarana fipetrahany izy. Amin'ny manodidina ny 100 matihanina manontolo andro sy ny fikarohana siantifika mpiasa mpamokatra fitantanana ekipa, dia efa manan-tsaina nataony tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny teknolojia. Ny R & D ekipa efa lasa manan-tsaina andianà fanandratako fitaovana mifototra amin'ny fitsipika ara-tsiansa tsotra - elektronika Linear fiara. Ny manan-tsaina ny ambony latabatra Adjustable andian-dahatsoratra vokatra mifantoka amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny olona, ​​ny fianarana sy ny asa tsara, ny fahasalamana sy ny tontolo iainana.
Nandritra ny folo taona ny fampandrosoana, efa lasa any an-matihanina teknolojia avo-toeram-piasana, izay mirotsaka amin'ny vokatra fiara Linear 'fampandrosoana, ny famokarana sy ny varotra. Amin'izao fotoana izao, dia efa niforona telo vokatra rafitra ny manan-tsaina avo Adjustable birao andian-dahatsoratra, manandra andry andian-dahatsoratra sy mandeha ho azy mpitandrina andian-dahatsoratra, eo izay PST35 andiam-manan-tsaina Linear actuator izay nanjary fanta-daza Accessories marika ny Global fitsaboana, orinasa faritra, masoandro angovo , fanaka ary ny hafa mifandraika orinasa.
Tsy mifantoka amin'ny kalitaon'ny fanaraha-maso ny rehetra dingana sy ny fampiasam-bola ny R & D fitiliana fitaovana, miaraka amin'ny matihanina, tonga lafatra faritra, elektronika vokatra fitiliana fitaovana, feo insulation efitrano, hanoto sy nampakatra mizaha toetra fitaovana sy ny fiainana detector fitaovana, dia miantoka ny kalitaon'ny Narahi-toko, faritra ny dingana famokarana, ka samy vokatra lasa namaky tabataba fitsapana, Misy laharana entana sy ny harerahana fitsapana, ary samy lasa vokatra vao lasa namaky ela velona fitsapana.
Efa nahazo ISO9001: 2008 iraisam-pirenena ny rafitra fitantanana ny taratasy fanamarinana kalitao, ISO14001: 2008 ny tontolo iainana rafitra fitantanana ny taratasy fanamarinana. Vokatra rehetra manana andian-taona sy FCC taratasy fanamarinana ny sasany kosa nomba Ul sy saa taratasy fanamarinana.
Pusituo Mizara ho dimy departemanta samihafa, izay natsangana ny vondrona fandraharahana samihafa. Izany miantoka fa ny mpanjifa isaky ny faritra fandraharahana ho nanompo foana ny ekipana manam-pahaizana amin'ny faran'izay manan-karena traikefa sy ny fahalalana.
Foana izahay hanatanteraka ny teknolojia manan-tsaina zava-baovao, fikarohana sy ny fampandrosoana, ary hitondra avo-tsara, ny teknolojia vaovao fitarihana sy vahaolana ho an'ny mpanjifa, ary andian-dahatsoratra Pusituo vokatra no tsikelikely no eken'ny mpampiasa manerantany.
Ny feno ahitana vokatra isan-karazany mahira-tsaina avo Adjustable dabilio, Linear actuators, manandra andry, fanaraha-maso vata, mpitandrina, latabatra tampon ary isan-karazany ny Accessories. Mihoatra ny 75% ny vokatra dia Tailor-nanao vahaolana. Ny fireharehana ny tenantsika isika amin'ny maha-mpiara-miasa matanjaka teo amin'ny siansa sy ny teknolojia manan-tsaina faritra fampandrosoana.